मिर्गौला प्रत्यारोपण, म कति बाँच्छु ? दोस्रो प्रत्यारोपण सम्भव छ ? « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७६, १९ फाल्गुन सोमबार १२:२८ मा प्रकाशित
मान्छेको मिर्गौला विफल भइसकेपछि उ सँग केवल दुईओटा उपाय रहन्छ । कि त उसले नियमित डायलाईसिस गरेर बस्नुपर्छ या उसले मिर्गौला नै प्रत्यारोपण गर्नुपर्दछ । हामीले जहिलेपनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुभन्दा पहिला मिर्गौला दिने र लिने मानिस बिचको सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । मिर्गौला दान गर्ने मानिस स्वस्थ, रोग नलागेको र नाता पर्ने हुनुपर्दछ । उसको मिर्गौला निकालिसकेपछि भविष्यमा उसलाई कुनै पनि समस्या नआओस् र बाँकी रहेको मिर्गाैलाले कम्तीमा ८० वर्षको उमेरसम्म राम्ररी काम गरोस् भन्ने हिसाबले जाँचपर्ताल गरिएको हुन्छ । मिर्गौला लिने बिरामीमा शल्यक्रिया गर्नुपुर्व दिइने एनेस्थेसिया र पीडा सहनसक्ने क्षमता हुनुपर्दछ । साथै उसलाई कुनै संक्रमण भएको हुनुहुँदैन ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण तयारी
मिर्गौला दान गर्ने मानिस र मिर्गौला लिने बिरामीलाई फरक तरिकाले तयार गरिन्छ । सर्वप्रथम कानुनी प्रवधान र स्वास्थ्यको हिसाबले दुवैले मिर्गौला लिन र दिन मिल्ने/नमिल्ने पहिचान गरिन्छ । पहिचान भइसकेपछि मिर्गाैला लिने बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गरिन्छ । बिरामीलाई शल्यक्रिया गर्नुभन्दा २–३ दिन अगाडी नै अस्पताल भर्ना गर्नुपर्दछ । त्यसपछि शल्यक्रियाको पुर्वतयारी थालिन्छ । बिरामीको रगत र पिसाब जाँच गरिन्छ । उसको शरीरले प्रात्यरोपण गरेको मिर्गौलालाई (रिजेक्ट) नफ्याँकोस् भनेर २–३ दिन अगाडी देखिनै औषधि सेवन गर्न दिइन्छ ।
त्यसपछि मिर्गौला दान गर्ने मानिसलाई शल्यक्रिया कक्षमा लगिन्छ । सामान्यतया दान गर्ने मानिसको मिर्गौलालाई चिरेर (घाउ बनाएर) र ल्याप्रोस्कोपी (दुरबिनबाट हेरेर) निकाल्न सकिन्छ ।
मिर्गौला दान गर्ने मानिसलाई घाउ नबनाई ल्याप्रोस्कोपीको मद्धतले मिर्गौला निकाल्ने गरिन्छ । यो प्रविधिबाट मिर्गौला निकाल्दा घाउ पनि सानो हुन्छ । जसले शल्यक्रिया पछि दुःखाई कम हुनुका साथै दाग पनि ठुलो बस्दैन । मिर्गौला निकाल्ने तयार पुरा भइसकेपछि मात्र मिर्गौला लिने बिरामीलाई शल्यक्रिया कक्ष ल्याइन्छ । त्यसपछि रगतको नशामा हाल्ने क्याथेटर, क्यान्युला र औषधि दिने लाइन सबै हालिसकेपछि शल्यक्रिया सुरु गरिन्छ ।
शल्यक्रिया गर्दा लाग्ने समय
शल्यक्रिया ठ्याक्कै यति समय लाग्छ भन्न सकिदैँन । यदि हामीले ल्याप्रोस्कोपीको मद्धतले मिर्गौला निकाल्यौँ भने औसतमा डेढ देखि दुई घण्टा समय लाग्छ सक्छ भने चिरेर निकालेको खण्डमा एक देखि डेढ घण्टा लाग्न सक्छ । शरीरबाट मिर्गौला निकालिसकेपछि त्यसमा रगतको नशा आर्टरी, भेन, पिसाव नलीहरुलाई मिलाउनुपर्दछ । मिर्गौला लिने बिरामीलाई बेहोस बनाउदा देखि होस् आउन उसलाई करिब २–३ घण्टा लाग्न सक्दछ । मुख्य र जटिल शल्यक्रिया भनेकै रगतको नशा र पिसाव नलीहरुलाई जोड्ने शल्यक्रिया हो । यसका लागी करिब ३० देखि ४० मिनेट लाग्न सक्छ ।
साधारणतया मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको बिरामीलाई कुनै पनि जटिलता आएन, औषधिको असर देखिएन र मिर्गौलाले काम गर्न सुरु ग¥यो भने ४ देखि ५ दिन पछि बिरामी घर फर्किन सक्छन् । नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सफल दर एकदमै राम्रो छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि सो मिर्गौैला एक वर्ष सम्म काम गर्ने सफलदर ९५ देखि ९७ प्रतिशत रहेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सफलदर ९८.७ प्रतिशत रहेको छ । जुन विदेशको भन्दा राम्रो हो ।
मिर्गौला दान गर्ने मानिस र मिर्गौला लिने बिरामी बिच ५ देखि १० वर्षको उमेर अन्तर छ भने मिर्गौला म्याच हुन्छ । अहिले संसारभरीनै मिर्गौला दान गर्ने मानिसको सँख्या घट्दो क्रममा छ । नेपालको सन्दर्भमा मस्तिष्कमृत्यु भएको मानिसको मिर्गौला प्रत्यारोपण अझै सुरु हुन सकिरहेको अवस्था छैन । जसले गर्दा मिर्गौला पाउने सम्भावना ज्यादै न्युन छ ।
मिर्गौला दान गर्ने मानिसको उमेर ६० देखि ७० वर्षनै भएता यदि उनीहरु स्वस्थ छन्, अन्य कुनै रोग छैन र भविष्यमा मिर्गौला सम्बन्धी रोग लाग्ने सम्भवना देखिएको छैन भने त्यस्ता मानिसबाट हामी मिर्गौला ग्रहन गर्न सक्छाँै ।
यस्ता मानिसलाई मार्जिनल डोनर भन्ने गरिन्छ । उनीहरु बेस्ट डोनर भने होइनन् । हामीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सबैभन्दा सानो ८ वर्षका बच्चा देखि सबैभन्दा बढी ७५ वर्षको बृद्धाको मिर्गौला प्रत्योपण गरेका छौँ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका अधिकांश मानिसले दुई ओटा प्रश्न सोध्ने गर्छन् ।
डा. साब अब म कति बर्ष बाँच्छु ?
यदि प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौला पुनः विफल भयो भने के दोस्रो प्रत्यारोपण सम्भव छ ?
अवश्य सम्भव छ । विविध कारण प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौला विफल हुन सक्छन् । यसरी बिफल भएर देस्रो पटक प्रत्यारोपण गरेको अनुभव सबैभन्दा बढी त्रिवि शिक्षण अस्पतालसँग नै छ । हामीले अहिलेसम्म यस्ता १० जना बिरामीको पुनः मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेका छौँ । अहिले उनीहरु स्वस्थ छन् । उनीहरुको मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ ।